Enye yezindlela ethandwa kakhulu ukunquma sokukhulelwa - ukuhlolwa okukhethekile, kodwa ngokunemba yaso ephezulu njengoba abakhiqizi abathi. Singasho ukuthi imiphumela zamanga-negative neyamanga-HIV kungenzeka, kwezinye izimo, okufana yesibili evamile.
Ake sicabangele ukuthi iphutha sokukhulelwa ukuhlolwa futhi yini amaphutha bathembele.
Ake uqale nge yokuthi ukuhlolwa ezishibhile babe ukunemba engezansi futhi ngokuvamile at kusaqalwa kakhulu, bamane awuboni nesanda ezingeni hormone. Ngakho uma unquma ukuhlola ukukhulelwa phambi ukubambezeleka, kungcono ukuthatha ukuhlolwa ezibizayo, lapho uzwela lingaphezulu.
Manje siyazi, kungaba iphutha sokukhulelwa ukuhlolwa, kodwa kubalulekile ukuba acacise nezizathu zalokho.
Ukuthola imithi (isibonelo, "Pregnil" noma "Profazi") ongabonisa yalokho okungelona iqiniso. Ngakho uma belashwa, bese ulinda okungenani amaviki amabili ngaphambi wenza ukuhlolwa.
Amanga yi omuhle kungadalwa yisiphi isifo kwesimiso sokuzala.
Sekuyisikhathi ukuthola ukuthi le ukuhlolwa sokukhulelwa akulungile isiqondiso ezimbi. Njengoba vele sesiyazi, kule ndawo ukuhlaziya misfires kaningi, futhi izizathu akuzona kwesabise:
- mfushane kakhulu isikhathi yokukhulelwa;
- ukusebenza test ayilungile;
- i test aphelelwe yisikhathi;
- khona izifo kwezinso.
Kunezizathu eziningana ngenxa okuyinto ubona imiphumela ayilungile, kodwa sithole ukuthi ukuhlolwa unga sokukhulelwa amanga. Impendulo kulokhu kucacile: "Azikwazi." Uma uthenge ukuhlolwa izinga nazo zonke kwenziwe ngendlela efanele, iphutha incane. Manje ibonisa kafushane izizathu ezengeziwe ngenxa okuyinto umphumela ukuqhela kwelinye direction noma kwenye. Kufanele kuqashelwe ukuthi izimo ezinjalo ezingajwayelekile kakhulu futhi sokukhathazeka, ezimweni eziningi, akukho.
Uma kusaqalwa yokukhulelwa ziye zenzeka isisu nokuguqulwa, isivivinyo ingase ibonise yalokho ezimbi. Qiniseka ukuthi uxhumane nodokotela wakho uma unanoma iluphi uhlobo ubuhlungu noma ukopha.
Nquma uphethwe kungaba luhlolo noma ultrasonography. Ngenxa ezingeni engalungile hCG ngendlela umzimba ukuhlola kubonisa ukuthi yi ayilungile.
Zingabonisa iphutha sokukhulelwa ukuhlolwa uma noma iyiphi izimila. Ngeshwa, lokhu akulona icala lapho yalokho omuhle kungamanga, futhi esikhundleni ekuthuthukiseni sokukhulelwa izimila. Lesi sifo inyuka amazinga hCG, okuyinto inquma sokukhulelwa, kodwa kulokhu izimpawu waphawula ezifana ukopha, ukuhlanza.
Sahlola ngokuningiliziwe ukuthi isivivinyo singaduka. Njengoba kubonakala ngenhla, izizathu Imiphumela ayilungile Kuphakathi isifo, noma ukusetshenziswa engalungile. Landela imiyalelo ezidingida iphakethe bese labo ukuhlolwa ezakhelwe usuku lwakho ohlosiwe. Ngokwesibonelo, uma ucacise ukuthi umphumela uyoba eqondile, eziqala ukubambezeleka kwezinsuku ezimbalwa, akudingekile ukuba ulisebenzise ivela khona.
Menses mancane: Izimbangela. Ngemva kweminyaka engu-40 menses mancane. Mshini yentuthuko gipomenorei
Indlela ukukhetha izikali electronic commerce?
Indlela yokwenza imidwebo ku izipikili okufutshane
Udweba kanjani izibankwakazi. Nice futhi scary
Gubani umsila omude kunayo yonke? Animal Amaqhawe